Erling Braut Haaland Oo Diyaar U Ah Inuu Dhaqaaqo' Kadib Hadaladii Borussia Dortmund
HomeWararka CiyaarahaErling Braut Haaland oo diyaar u ah inuu dhaqaaqo’ kadib Hadaladii Borussia Dortmund
January 28, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Suuqa kala iibsiga 0
Erling Braut Haaland ayaa sheegay in uu aad u doonayo in uu ka dhaqaaqo kooxdiisa marka la eego hadaladii uu dhawaan soo jeediyay ee ku aadanaa in Borussia Dortmund ay ku cadaadinaysay in uu go’aan ka gaadho mustaqbalkiisa.
Horaantii bishaan, 21 jirkaan ayaa u sheegay majaladda wararka Sweden ee Viaplay inuu dareemayo cadaadis kaga imaanaya kooxda Bundesliga ka dhisan si ay go’aan uga gaaraan haddii uu diyaar u yahay inuu mustaqbalkiisa u hibeeyo kooxda ama u dhaqaaqo meel kale.
Dortmund ayaa tan iyo markii ay beenisay in ay waqti kama dambays ah ku kordhisay go’aanka weeraryahanka, iyadoo agaasimaha ciyaaraha Michael Zorc uu sheegay in “hadallada Erling ay naga yaabiyeen xoogaa”.
Isaga oo la hadlaya Sky Sport News , Haaland waxa uu yidhi: “Waxa aan dareemay in la gaadhay wakhtigii aan wax sheegi lahaa.
“Iminkana run ahaantii ma rabo inaan wax badan ka sheego, wixii la yidhi, waa la yidhi, waanu sii soconaa.”
Haaland ayaa la filayaa inuu udub dhexaad u noqdo loolanka suuqa kala iibsiga ee u dhexeeya kooxaha caanka ah ee Yurub xagaaga, marka uu furmo qandaraaskiisa 64 milyan ginni.
Manchester City , Manchester United , Chelsea , Barcelona , Real Madrid , Bayern Munich iyo Paris Saint-Germain ayaa dhamaantood loo aqoonsaday inay xiiseynayaan weeraryahanka, kaasoo dhaliyay 80 gool 79 kulan oo uu u saftay Dortmund tartamada oo dhan.